Kuratidza zvinyorwa neelebheri Honkův potok
Matombo akakurumbira igirini-grey, grey uye dema-grey-grey mabwe uye siltstones yeRudnice mahombe ezvikamu zvePasistian Vrchlabi Fform. Iwo anonyanya kuve ane calcareous uye ane chinzvimbo chechaneyy kana chakaomeswa akacheneruka uye dolomitic limestones, kazhinji butuminous. Aya ndiwo madhizaini echifukidzo egungwa, anofukidza iyo yose yekumaodzanyemba kweKrkonoše Basin pakutanga kweRepian uye kusvika kumadokero uye muMunich Basin. Outcrops inzvimbo yepaleontological iyo ine hupfumi hwakawanda hwezviruva uye fauna yakawanikwa, zvichiratidza chizvarwa chePrim. Iyo Rudnice mahona ndiyo yakanyatsogadzikana uye stratigraphically yakanyanya kukosha nzvimbo yese.